KHILAAF: Paul Pogba Oo Ka Cadhooday Tusaale Uu Lukaku Ugu Soo Hal-qabsaday Mohamed Salah & Firmino Iyo Solskjaer Oo Kala Badbaadiyey Labada Xiddig – Latest Sports News
KHILAAF: Paul Pogba Oo Ka Cadhooday Tusaale Uu Lukaku Ugu Soo Hal-qabsaday Mohamed Salah & Firmino Iyo Solskjaer Oo Kala Badbaadiyey Labada Xiddig
Weeraryahanka Manchester United ee Romelu Lukaku ayaa hadallo kulul u ku ganay saaxiibkii Paul Pogba kaddib ciyaartii Sabtidii ee rikoodaha uu khasaariyey laacibka reer France.
Manchester United ayaa Southampton kaga adkaatay 3-2, waxaana laba ka mid ah goolashaas dhaliyey Lukaku, hase yeeshee rikoodhe dhamaadkii ciyaarta lagu galay Marcus Rashford ayaa waxa qaatay Pogba oo khasaariiyey, kaas oo sidoo kale uu doonayey Lukaku inuu dhaliyo si uu saddexley uga diiwaangashado kulanka.
Sida uu qoray wargeyska The Sun ee kasoo baxa UK, Lukaku ayaa ka dalbaday Pogba inuu u daayo si uu rikoodhkiisa dhalinta sare ugu sii qaado, hase yeeshee kubbad-sameeyaha reer France ayaa ku adkaystay inuu yahay laacibka uu tababaruhu u go’aamiyey tuurashada rikoodheyaasha kooxdu hesho, sidaas daraadeedna aanu siinaynin.
Wargeysku waxa uu xusay in markii ay ciyaaryahannadu ka baxeen garoonka ee ay qolka labbiska galeen in Lukaku uu mar kale kusoo laabtay Pogba isagoo tilmaamay inuu ka hor joogsaday saddexley uu dhashan lahaa, waxaanu xasuusiyey in haddii uu isagu booskaas ku jiro inuu u dayn lahaa rikoodhaha.
Lukaku oo cadhadiisu aan kaantaloori karaynin ayaa waxa uu tusaale usoo qaatay Mohamed Salah iyo sidii uu rikoodhaha ugu hadiyeeyey Roberto Firmino ciyaartii Arsenaal ay ku burburiyeen 5-1 si uu u dhamaystirto saddexleyda, balse isagu uu xattaa taana garan waayey.
Pogba ayaa markaas kaddib ka cadhooday tusaalaha Lukaku, waxaanu u sheegay inuu gudanayey waajib saarnaa, waxaana xaaladda oo xalkaas maraysa soo kala dhex-galay tababare Solskjaer oo murankooda damiyey.
United oo ismaan-dhaafka ciyaaryahannadeedu weli sii qoyan yahay, ayaa waxay habeen dambe u tegi doontaa Paris Saint Germain oo ay lugta labaad ee wareegga 16ka Champions League ku wada ciyaari doonaan magaalada Paris, waxaana kulankaas ka maqnaanaya Paul Pogba oo ganaax ah.
Marka ay ciyaarta Arbacada kasoo laabtaan, waxay xiddigaha United u diyaar-garoobi doonaan kulanka Axadda ay u tegayaan Arsenal ee horyaalka Premier League, taas oo ay u baahan yihiin inay guul ka keenaan si ay kaalinta afraad ee miiska kala sarraynta ugu sii negaadaan.